သိပ္ပံနှင့် ဒဿနပညာ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← သိပ္ပံပညာ၊ ဟော့ကင်း၊ ဘလက်ဟိုး(လ်)နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ
ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်ပညာနှင့် ၀ိပဿနာနည်းပညာ →
သိပ္ပံသည် အမျိုးမျိုးသော ခရီးကြမ်းများကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ဖြတ်သန်း အောင်မြင်လာသည်နှင့်အမျှ သိပ္ပံဒဿနပညာရှင်များက သိပ္ပံ၏ တွေ့ရှိချက်များအား ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ကြရသည်။ ယင်းကား သိပ္ပံနှင့် ဒဿနပညာရပ်တို့၏ အပြန်အလှန် သမိုင်းစဉ်ဖြစ်သည်။
သိပ္ပံသည် အဏုမြူခေတ်မှ နျူးကလီးယားခေတ်သို့ ပြောင်းခဲ့သည်။ တစ်ချိန်က အဏုမြူသည် နောက်ဆုံးအခြေခံတရား (The Most Fundamental Particle) ဟူ၍ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အချိန်နဲ့ အတူတူ ဆက်လက်လေ့လာသောအခါ အဏုမြူကို ခွဲစိတ်လျှက် နျူထရွန်နှင့် ပရိုတွန်တို့အား အီလက်ထရွန်က ပတ်နေသည်ဟု တွေ့ရှိရပြန်သည်။ ထိုအခါ အက်တွမ်ဝါဒ ကျဆုံးခဲ့သည်။ အက်တွမ်သည် နောက်ဆုံးပေါ် ချေဖျက်၍ မရနိုင်သော အမှုန်တစ်ခုဟု ယူဆခြင်းသည် ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ နျူးကလီးယား Level ၌ အီလက်ထရွန်ကို လေ့လာသောအခါ (Quark) ကွာ့(ဒ်)ကလေး သုံးခု ထွက်လာ ပြန်သည်။ ထိုအခါ (The Most Fundamental Particle) အဖြစ်နှင့် ကွာ့(ဒ်)များကို ယူဆရပြန်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့် သိပ္ပံပညာသည် အဆင့်ဆင့် တိုးတက်လာသည်၊ အနုစိပ်လာသည်၊ သိမ်မွေ့နူးညံ့လာသည်၊ အခြေအမြစ်ကျလာသည်။ သို့သော် အဆုံးစွန် မဟုတ်ချေ။ ယခု နောက်ဆုံးပေါ်နီးနီး တွေ့ရှိချက် (God Particle) ဟူသည်မှာလည်း အဆုံးစွန်သော အခြေခံအမှုန် မဟုတ်သေးချေ။ ဆက်လက်၍ လေ့လာရန် လိုအပ်နေပေဦးမည်သာဖြစ်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့် သိပ္ပံသည် ကရိယာအသုံးချ၍ လေ့လာခဲ့ရာ တဖက်၌ မသေချာခြင်းနိယာမ (Uncertainty Principle) ဆိုသော ပုံသေနည်း ပေါ်ထွက်လာသည်။ ယင်းကို ဟိုင်ဇင်ဘတ် (သိပ္ပံပညာရှင် နိုဗယ်ဆုရ) က တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုတွေ့ရှိချက်ကို ယခုထက်တိုင် အမှီသဟဲ ပြုနေရသည်။ ဟော့ကင်းသည် ထိုတွေ့ရှိချက်ပေါ် မူတည်၍ သူ၏ ဘလက်ဟိုး(လ်) ဆိုင်ရာ အယူအဆများအား ပြုပြင် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဤနည်းအားဖြင့် မသေချာခြင်း နိယာမသည် လွန်စွာမှ ခိုင်လုံသည်ဟု သိပ္ပံလောက၌ သတ်မှတ်ကြရသည်။ ထိုအခါ မသေချာမှုနိယာမ၏ အနှစ်ချုပ်မှာ ရုပ်ကို ရုပ်နှင့် တိုင်းတာသောကြောင့် ပြဿနာဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အနီးစပ်ဆုံး သူတို့ပြောသည့် စကားများကို ပြောရမည်ဆိုလျှင်
(Whenever one tries to make observation by using the instruments then the instruments they use in the observation will affect the natural phenomena. Consequently, the natural phenomenon is already affected and cannot be as it is. .. . )ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အနီးစပ်ဆုံး အဓိပ္ပာယ်မှာ ရုပ်ကမ္ဘာ၌ ရုပ်ကိရိယာနှင့် တိုင်းသောအခါ တိုင်းသော ရုပ်ကိရိယာသည် ရုပ်ကမ္ဘာအား ရွေ့လျှားမှု ဖြစ်စေသဖြင့် ရုပ်ကမ္ဘာ၏ အရှိ အရှိအတိုင်း သဘာဝကို မတွေ့ရှိနိုင် ဟူသော သဘောပင် ဖြစ်သည်။ ဤဖော်မြူလာသည် ကမ္ဘာကျော် ဖော်မြူလာ ဖြစ်သည်။
ထိုဖော်မြူလာအကြောင်းကိုမူ ဗုဒ္ဓဘာသာလေ့လာလျှင် အလွယ်တကူ တွေ့နိုင်သည်။ တွေ့နိုင်သည်မှာ တရားကျင့်သောအခါ စိတ်ကို စိတ်နှင့် လိုက်နေ၍ အဖြေမထွက်နိုင် စိတ်ကို ဉာဏ်နှင့် လိုက်ရမည် ဟူသော သဘောပင် ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စကို မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီးက ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဟူ၍ သုံးနူန်း ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။ လွန်စွာမှ ကြည်ညိုဖွယ်ရာကောင်းသော အဆိုအဆုံးမဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးအပ်ပါသည်။ အမှန်တော့မူ စိတ်ကို ဉာဏ်ဖြင့် ရှုသတ်ရမည်သာတည်း။